BMI (ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း)ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲ။ - Hello Sayarwon
BMI (ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း)ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲ။
တစ်နေ့တာလုံး ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်အလုပ်လုပ်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း ပင်ပန်းလာတယ်ဆိုပြီး ထိုင်ပြီး စာအုပ်ဖတ်တယ်၊ တီဗွီကြည့်တယ်၊ ဂိမ်းဆော့တယ်လုပ်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ပြည့်လာတယ်။ ထိုင်ရ၊ထရလေးလာတယ်။ ငါအရမ်းများဝလွန်းနေပြီလား၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လောက်တဲ့အထိများ ဝနေပြီလားလို့ တွေးနေလား။ ဝနေလားမဝနေဘူးလားဆိုတာကို သူများတွေကိုလျှောက်မမေးဘဲ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
BMI( ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း) ဆိုတာ
BMI (ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း) ဆိုတာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အရပ်အမြင့်​ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ အဆီပမာဏကို တွက်ချက်ဖို့ လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ပုံသေနည်းတစ်ခုပေါ့။ ဒါပေမယ့် BMI (ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း) က ခန္ဓါကိုယ်ကအဆီပမာဏကို အတိအကျမတွက်ချက်နိုင်ပါဘူး။
၁၉ ရာစုနှစ်အစောပိုင်းကာလမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ဒီပုံသေနည်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို အရပ်အမြင့်ရဲ့ နှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့စားပြီး ထွက်လာတဲ့အဖြေနဲ့ အဝလွန်နေတာလား၊ ပုံမှန်ပဲလား၊ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်နည်းနေလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရတာပါ။ ဒီလိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်များနေရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ရအောင် လျှော့လို့ရပြီး ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနေတဲ့အခါမှာလည်း အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးဖို့ ချင့်ချိန်လို့ရပါတယ်။ အဆီပိုတွေများနေလားဆိုတာကို တွက်ချက်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ အရပ်နဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို တိုင်းတာပြီး BMI တွက်ချက်လိုက်လို့ BMI က ၂၅ ကနေ ၂၉.၉ အတွင်းရှိနေမယ် ဆိုရင်တော့ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်များနေပါပြီ။ တကယ်လို့ BMI က ၃၀ ဒါမှမဟုတ် ၃၀ ထက်ကျော်နေမယ်ဆိုရင် အဝလွန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် အနေအထိုင် အစားအသောက်ကို ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါမယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ BMI က ၁၈.၅အောက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်နည်းနေတာကြောင့် အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ BMI က ၁၈.၅ ကနေ ၂၄.၉ အတွင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။
BMI တွက်ရတာက ခက်ခဲရှုပ်ထွေးမနေပါဘူး။ သချာၤပုစ္ဆာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းသလောက်ပါပဲ။ဖော်မြူလာတစ်ခုထဲမှာ ကိုယ်အလေးချိန် နဲ့ အရပ်အတိုင်းအတာကို ထည့်ပြီးတွက်ချက်ရုံပါ။ သိထားသင့်တာတစ်ခုကတော့ BMI တွက်တဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကီလိုဂရမ်နဲ့ထည့်သွင်းပြီး အရပ်အတိုင်းအတာကိုတော့ မီတာနဲ့တွက်ချက်ရမှာပါ။
ဖော်မြူလာပုံစံက – BMI (ခန္ဓါကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း) = ( ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)/ ( အရပ်အတိုင်းအတာ (မီတာ နှစ်ထပ်ကိန်း))
ဥပမာ သင့်အရပ်က ငါးပေငါးလက်မရှိမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၅၂ပေါင်ရှိမယ်ဆိုပါစို့။ သင်ဝနေလား မဝနေဘူးလား ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အရပ်အမြင့် ငါးပေငါးလက်မ = ၁.၆၅၁မီတာ။ နှစ်ထပ် = ၁.၆၅၁ x ၁.၆၅၁ = ၂.၇၂၆
ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅၂ပေါင် = ၆၈.၉၄ ကီလိုဂရမ်
BMI = ၆၈.၉၄/၂.၇၂၆ = ၂၅.၃
ကဲ…ဒီတွက်နည်းတွေက ရငပ်တယ်။ ကိန်းဂဏန်းတေါ မတွက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီ App လေးမှ တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
သဘောကတော့ သင့်ရဲ့လက်ရှိကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ရှိသင့်တဲ့ပမာဏထက် အနည်းငယ်များနေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်များနေလား နည်းနေလားဆိုတာကို သူများတွေလျှောက်မေးနေစရာမလိုဘဲ၊ မှန်ရှေ့ကြည့်ပြီး စဉ်းစားနေစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူသိနိုင်ပြီပေါ့။
အခုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ BMI ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လေးရရှိအောင် လုပ်ဆောင် ထိန်းသိမ်းလိုက်ကြပါနော်….
What is BMI and How to Calculate It https://www.active.com/fitness/articles/what-is-bmi-and-how-to-calculate-it Accessed Date 18 June 2018
What is Body Mass Index (BMI)? https://www.news-medical.net/health/What-is-Body-Mass-Index-(BMI).aspx Accessed Date 18 June 2018
What Is Body Mass Index? How Is BMI Calculated? https://www.thecalculatorsite.com/articles/health/what-is-body-mass-index.php Accessed Date 18 June 2018
အစားအသောက်မပျက် တစ်ရက်ကို ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ပေါင်ကျစေမယ့် နည်းလမ်း
ကိုယ်အလေးချိန် အမြန်လျှော့ချနိုင်မယ့် အဆင့်သုံးဆင့်